Archives voajanahary voajanahary - TELES RELAY
hatsaran-tarehy Fahazarana tsara Lire la suite ... rosia Firaisana sy fifandraisana care
Lesotho, mpisava lalana ny rongony ara-pahasalamana, any Afrika Avaratra
Tamin'ny taona 2017, ara-dalàna ny rongony rongony any Lesotho, fanjakana kely any Afrika Atsimo. Nanomboka tamin'izay dia tafakatra amin'ny "volamena maitso" marina ity zavamaniry ity, izay tsy azo lavina fa mandray anjara amin'ny toekarena ankapobeny ao amin'ny firenena. ...
Ahoana ny fomba hialana ny fofona fofona amin'ny fomba voajanahary ao anatin'ny 4-dingana?
Chinde Jona 13, 2020 0
Raha ny fitsipika, na dia amin'ny fahasalamana tsara aza, ny fivaviana dia misy fofona manitra kely foana. Na izany aza, raha hitanao fa mafy orina na somary tsy mahafinaritra ity fofona ity, dia mety ho olana ara-pahasalamana, indrindra raha ny fofona miaraka amin'ny hafa ...